Kianjan’ny 13 Mai : Hanatevin-daharana ny mpiasam-panjakana
Allemagne : Des données personnelles de centaines de responsables divulguées sur Internet
Football – Racisme : « Je ne suis pas un singe », un documentaire où les langues se délient
Coupe d'Asie : A 23 contre l'Australie
ATP – Brisbane : Tsonga en demi-finales
Après fête et propagande : Grand repos pour les artistes
Tsy fanekena hala-bato : Hihamafy ny hetsika eny amin’ny 13 Mai anio
Hampiasa fitaovana arifomba entina hampahafantarana ny vahoaka manerana ny Nosy ny hala-bato, nitranga nandritra ny fifidianana ny faha-19 desambra teo ny mpitarika ny tolona etsy amin’ ny kianjan’ ny 13 Mai. Fohy ny fotoana ka tsy tokony hatoritory ny rehetra manoloana izao zava-mitranga izao, hoy ny mpisolovava, Hanitra Razafimanantsoa
Hitohy ary hihamafy ny hetsika izay hotanterahin’ny ankolafy Ravalomanana Marc hanomboka anio, araka ny fanazavana izay nomen’ny mpisolovava sady solombavambahoaka, Hanitra Razafimanantsoa. Hatreto, mbola tsy nisy ny antso avy amin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana amin’ny fampitahana ny vokatra am-pelatanan’ny antoko TIM ny sy HCC, na dia maro aza ny fangatahana efa natao tahaka ny avy amin’ ny hetsika ROHY. Raha ny fanazavana izay nomen’ny mpisolovava Hanitra Razafimanantsoa hatrany, dia ho tonga eny amin’ ny kinjan’ny 13 Mai, ireo solaitra goavana elektronika hanazavana ny vokatra sy ny hala-bato nataon’ny kandidà laharana faha-13. Fohy ny fotoana ka tsy tokony hatoritory ny rehetra, raha natao mantsy ho izy ny kaonty dia manana hatramin’ny faha-7 ny volana janoary ny mpitolona hampahafantarana fa misy ny hosoka, izay tsy tokony eken’ ny rehetra.
Hatrany amin’ ny diman-jato sy arivo mahery ny fitoriana izay voarain’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana mikasika ny fifidianana dingana faraharoa, izay azo hinoana fa tsy ho vitan’ ny HCC hatramin’ ny faha -7 ny volana janoary ho avy izao ny fikirakirana azy. Ireo fitoriana ireo dia tsy avy amin’ ny antoko Tiako i Madagasikara na ny TIM fotsiny ihany, fa eo ihany koa ny avy amin’ ny fiarahamonim-pirenena. Io salan’isa io, izay azo lazaina fa tsy ho vitan’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana anatin’ ny fotoana fohy ny mandika azy. Izany hoe tsy tokony anatin’ ny hamehana no handraisan’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny zava-misy, satria hiankinan-javatra maro izany. Tsy tokony ataon’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ambanin-javatra ny fitoriana am-pelatanan’izy ireo, satria tampoka teo niakatra ny tahan’ ny mpifidy, maro ireo sonia izay lasa lavotondro ary indrindra ireo hosoka maro samihafa.